आजका १० महत्त्वपूर्ण खबर: प्रदेश १ मा राई, कर्णालीमा शाही, सुरु भयो प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई नियुक्त भएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राईलाई आज प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सोमबार भीम आचार्यले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन गठबन्धनको तर्फबाट राईले प्रदेशसभाका ४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । मंगलबार प्रदेश प्रमुख अधिकारीले राईलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले दाबी पेस गरेका छन् । शाहीले मंगलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका हुन् । सत्तारुढ गठबन्धन, माओवादी केन्द्रबाट १२ जना, कांग्रेसबाट छ जना, एकीकृत समाजवादीबाट तीन जना गरी २१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न शाही प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका हुन् ।
निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरण छानविन समितिले पक्राउ गर्न सिफारिस गरेका पूर्वसांसद गृह मन्त्रालयमै भेटिएका छन् । बाँकेका दुई महिलाको शंकास्पद मृत्युबारे छानविन गर्न गठित टोली आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालय पुग्दा पूर्वसांसद बादशाह कुर्मी त्यहीँ थिए । कुर्मी उनै हुन्, जसलाई छिमेकी निर्मला कुर्मीको सम्पत्ति हडपेर बेपत्ता पारेको आरोप लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप- २६) मा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गो पुगेका बेला उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।
यूएईमा जारी टी- २० विश्वकपको सुपर- १२ मा बंगलादेशले दक्षिण अफ्रिकालाई ८५ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले १८.२ ओभरमा अलआउट हुँदै ८४ रन बनायो । उसका लागि मेहदी हसनले २७, लिटन दासले २४ र शमिम हुसेनले ११ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । उसका चार खेलाडी शून्य रनमा आउट भए ।
दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा छ । पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियासँगको हारपछि दक्षिण अफ्रिकाले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकी टोलीले पछिल्ला दुई खेलमा लगातार जीत निकालेको छ। बंगलादेशविरुद्ध आज जीत निकाल्दै सेमिफाइनलमा पुग्ने संभावनालाई थप बलियो बनाउन चाहन्छ ।
दुई विद्युत्‌गृहबाट उत्पादित विद्युत्‌लाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार राति १२ बजेदेखि ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात सुरु गर्नेछ । हाल यो लाइनबाट विद्युत् आयात मात्र भइरहेको छ । निर्यातको अनुमति पाएसँगै नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया मंगलबार सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको हो ।
गत कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ । प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले उजुरीको सूचना भोलि बुधबार सरकारी संचार माध्यमबाट प्रकाशित गरी नागरिकलाई जानकारी दिन समितिका सचिवलाई निर्देशनसमेत दिए । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध १० दिनभित्र परेको उजुरीमाथि छलफल गरेपछि समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
नेपाल यू- २३ टोली भोलि स्वदेश फर्कने
एएफसी यू- २३ एसियन कप छनोट प्रतियोगितामा सहभागी जनाएको नेपाली टोली भोलि (बुधबार) नेपाल फर्कने भएको छ । छनोट प्रतियोगितामा तीन खेल खेलेको नेपाली टोली बुधबार साँझ ६ः३५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्ने कार्यक्रम रहेको टिम व्यवस्थापक उत्तम न्यौपानेले जानकारी गराए । प्रतियोगितामा नेपालले तीन खेल खेलेको थियो । नेपाल तीनवटै खेलमा जीतविहीन र गोलविहीन रह्यो ।
पहिलो खेलमा बलियो इरानविरुद्ध ४-० गोल अन्तरले पराजित नेपाल दोस्रो खेलमा आयोजक ताजकिस्तानसँग ६-० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो । अन्तिम खेलमा भने नेपाल लेबनानसँग ४-० गोल अन्तरले नै पराजित भयो । अन्तिम खेलमा आयोजक ताजस्कितानलाई पराजित गर्दै इरान समूह ‘बी’को विजेताको रूपमा फाइनल चरणमा स्थान बनायो ।
समूह ‘बी’मा ९ अंकसहित अपराजित इरान शीर्ष स्थानमा रह्यो । एक खेलमा पराजित ताजकिस्तान ६ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा तीन खेलमा एक खेल जितेको लेबनान तेस्रो स्थानमा रह्याे । यता, नेपालले तीन खेलमा जीतविहीन र गोलविहीन रहँदा १४ गोल व्यहोर्दै तालिकाको पुछारमा रह्यो । यस प्रतियोगितामा नेपाल लगातार तेस्रो संस्करण गोलविहीन भएको हो । यसअघिका दुई संस्करणमा समेत नेपाल गोलविहीन रहँदै आएको थियो ।
टी- २० विश्वकपबाट तीन विश्व च्याम्पियन टिम बाहिर !
टी- २० विश्वकप २०२१ को उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ सबै टोली युएईमा छन् । अहिलेसम्म करिब आधा प्रतियोगिता सकिएको छ । इंग्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ भने पाकिस्तान पनि लगभग सेमिफाइनलमा पुग्ने चरणमा छ ।
पाकिस्तान समूह २ को शीर्ष स्थानमा रहँदा इंग्ल्यान्ड समूह १ को शीर्ष स्थानमा छ । तर, तीन पूर्व टी- २० विश्वकप च्याम्पियन टोली अहिलेको विश्वकपबाट बाहिरिने संघारमा छन् । ती टोलीहरू हुन्, भारत, श्रीलंका र वेस्ट इन्डिज ।
चारमध्ये तीन खेलमा हार बेहोरेर टी- २० विश्वकपबाट बाहिरिएको टोली हो श्रीलंका । श्रीलंकाले छनोट चरणका सबै तीन खेल जितेको थियो । तर, सुपर- १२ मा भने आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
वेस्ट इन्डिजले अहिलेसम्म तीनमध्ये एउटा मात्र खेल जितेको छ । उसलाई सेमिफाइनल पुग्न पनि कठिन छ । वेस्ट इन्डिजले सन् २०१२ र सन् २०१६ मा दुई पटक टी- २० विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । तर, यसपालि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।
टी- २० विश्वकप २०२१ मा अहिलेसम्म इंग्ल्यान्ड मात्र सेमिफाइनलमा पुगेको छ । टोलीले अहिलेसम्म खेलेका चारवटै खेल जितेको छ । जोस बटलरको शतकको मद्दतले इंग्ल्यान्डले श्रीलंकालाई सोमबार २६ रनले पराजित गरेको हो । इंग्ल्यान्डले सन् २०१० मा टी-२० विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । जारी विश्वकपमा इंग्लिस टोली लयमा छ । बलर र ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पाकिस्तानले आफ्ना तीनवटै खेल जितेको छ र यो टोली समूहको शीर्ष स्थानमा छ । पाकिस्तानको बलिङ दमदार फर्ममा छ ।